အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - စာမျက်နှာ 10 - ဤနေရာသို့သွားရန် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Author Archives: ဤနေရာသို့သွားရန် (စာမျက်နှာ 10)
ENENSYS ကွန်ယက်ထုတ်လွှင့် ASIA မှ 2018 စမ်းကြည့်ရန်
ENENSYS အသံလွှင့်အာရှ 2018 မှာထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဖြေရှင်းချက်၏ပြီးပြည့်စုံသောအကွာအဝေးကိုပြသခြင်းမရှိရပ်: DTT နှင့်ကေဘယ်လ်ကွန်ရက်များအတွက်လျာထားသောဒေသခံအကြောင်းအရာသွင်းထောက်ပံ့ပေးသော 4H2-06 ENENSYS '' AdsEdge ဖြေရှင်းချက် - ပုံမှန်အားဖြင့်ကြော်ငြာတွေ, သတင်း, ရာသီဥတု - AdsEdge နှင့်ကင်ပိန်း Manager ၏ဖွဲ့စည်းထားသည်။ AdsEdge တစ်ဦးပေါင်းစပ်ဗီဒီယိုကဆာဗာနှင့် splicer သည်နှင့်ကွန်ရက်များ (DTT TX ရဲ့အစွန်းမှာနေရာချနေသည် ...
VP စီးပွားရေး & ဥပဒေရေးရာရေးရာအဖြစ် Insight တီဗီရက်ချိန်း Angela Borrillo
Insight တီဗီ, action ကိုအားကစား, ဖျော်ဖြေရေး, လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဖုံးအုပ်ဇာတိ UHD အကြောင်းအရာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး UHD HDR ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများတ VP စီးပွားရေး & ဥပဒေရေးရာရေးရာအဖြစ် Angela Borrillo ၏ရက်ချိန်းကြေညာခဲ့သည်။ သူမသည်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း Insight တီဗီ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်မဟာဗျူဟာနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေများနှင့်အတူလိုက်နာမှုအတွက်ကုမ္ပဏီလည်ပတ်သေချာနှင့်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည် ...
Calrec အသံလွှင့်အာရှ 2018 preview ကို
Calrec အသံသီးသန့် On-လေထုနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဖော်စပ်အသံအတွက်ထူးချွန်ထံအပ်နှံသည်။ 50 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုမိုများအတွက်တစ်ဦးကထုတ်လွှင့်အထူးကု, Calrec ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံးထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်အပေါ်မှီခိုဒစ်ဂျစ်တယ် consoles စတဲ့အကွာအဝေးတီထွင်ခဲ့သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက calrec.com မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။ ဤနေရာတွင်ပေါ်ထွန်းအားလုံးအမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။ Booth 6C3-01 များအတွက်နယူး ...
LIVEU 2018 ထုတ်လွှင့် ASIA မှအစမ်းကြည့်ရန်
LiveU ၏တည်နေရာ - 6J4-01 LiveU, အသက်ရှင်သောဗီဒီယိုတော်လှန်ရေးကားမောင်းတီဗီများအတွက် streaming တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုပေး, မိုဘိုင်း, အွန်လိုင်းနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာနေသည်ရပ်။ ယခုနှစ်ရဲ့အသံလွှင့်အာရှမှာ LU600 4K HEVC ထုတ်ကုန် suite ကို Enhanced, LiveU အပါအဝင်၎င်း၏အသစ်တိုးမြှင့် LU600 4K HEVC ခရီးဆောင်ဂီယာထုတ်ကုန် suite ကိုပြလိမ့်မည်: 4K SDI ဟာယပူဇော်သက္ကာ - LiveU ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ် HEVC 4K-SDI ကဒ်တစ်ခုထပ်တိုးတင်ဆက် ...
Insight တီဗီနည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာအဖြစ် Gavin ဟို၏ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းကြေညာ
Insight တီဗီ, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး UHD ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အရေးယူအားကစား, ဖျော်ဖြေရေး, လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဖုံးအုပ်ဇာတိ UHD HDR အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူတစ်ဦး, နည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာချက်ချင်းထိရောက်အဖြစ် Gavin ဟို၏ရက်ချိန်းကြေငြာလိုက်သည်။ channel ကိုရဲ့ဒတ်ခ်ျဌာနချုပ်မှာအခြေခံပြီးဟို Insight တီဗီရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဦးတည်ချက်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ယင်း၏ချဉ်းကပ်နောက်ဆုံးပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနဲ့အညီဖြစ်ကြောင်းသေချာစေမည်။ ...
Insight တီဗီ THRU စွန့်စားမှု Reality Show ကို၏ရာသီ2ကြေညာ
Insight တီဗီ, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး UHD ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အရေးယူအားကစားဖုံးအုပ်ဇာတိ UHD HDR အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့တ Insight TV နဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအပေါ်ကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ2အတွက်လေထု, THRU ယင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြစ်မှန်ပြပွဲ၏ရာသီ 2018 ဝဖြစ်ပါတယ်။ တီဗီ။ မူလကကိန်းအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် MIPCOM event မှာမိတ်ဆက်ပြသခဲ့သောစီးရီး, သတ္တိ၏သင်းကိုမြင် ...
Insight တီဗီစျေးကွက်ဒါရိုက်တာအဖြစ် Jenna Vaartimo ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းကြေညာ
Insight တီဗီ, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး UHD ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အရေးယူအားကစားဖုံးအုပ်ဇာတိ UHD HDR အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့တ Marketing ကိုဒါရိုက်တာအဖြစ်အလွန်ကြုံတွေ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စျေးကွက်အလုပ်အမှုဆောင် Jenna Vaartimo ခနျ့အပျခဲ့သညျ။ channel ကိုရဲ့ဒတ်ခ်ျဌာနချုပ်မှာအခြေခံပြီး Vaartimo ကုမ္ပဏီတလွှားအားလုံးစျေးကွက်မဟာဗျူဟာကြီးကြပ်ပါလိမ့်မယ်။ Vaartimo ဖင်လန်စီးပွားဖြစ်တီဗီဘူတာရုံ MTV ကနေ Insight တီဗီပူးပေါင်းမည် ...
LiveU နှင့် Griiip အဖွဲ့ Up ကို entry-level ဖော်မြူလာတပ်အားကစားများအတွက် Dynamic ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောတိုက်ရိုက်အသံလွှင့် Create မှ
Griiip, မြေ-ခြိုးဖောကျ G1 ဖော်မြူလာကားများနှင့်ဖော်မြူလာ 1 ရောက်ရှိဖို့အယောင်ဆောင်ယာဉ်မောင်းများအတွက်အသစ်များကို G1 စီးရီးကိုတည်ထောင်သူ၏ထုတ်လုပ်သူ, နှစ်ဦးစလုံးနည်းပညာဆိုင်ရာရိုးရှင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌, တပ်အားကစားဖုံးလွှမ်းသောလမ်းတစ်ပါရာဒိုင်းပြောင်းလဲမှုကိုဖန်တီးရန် LiveU အတူတက်ပူးပေါင်းထားပါတယ် နှင့်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရေး။ Griiip ၌တည်သောပြောင်းလဲနေသော, ပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးလွှမ်းခြုံပေးထွက်မသတ်မှတ် ...
Calrec အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာတာဝန်ရှိသူတဦးကဖြန့်ချိအဖြစ် GSL ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အတူမိတ်ဖက်
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာယင်း၏လက်လှမ်းမမီတိုးမြှင့်ဆက်သွားဖို့ Calrec ယူအေအီး, ကာတာ, အိုမန်, ဂျော်ဒန်, ကူဝိတ်, ဘာရိန်းနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျအပါအဝင်ဒေသအနှံ့ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဖြူးပေးဖို့ဒူဘိုင်းအခြေစိုက် GSL Professional ကအတူပူးပေါင်းခဲ့သည်။ GSL, ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးရဲ့ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီး Calrec ကိုယ်စားပြုသည်၎င်း၏အသစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာသည် IP-based ရေဒီယိုစနစ်ကအမျိုးအစား R. GSL ပြည့်စုံအသံဖိုင်ဖြစ်ပါသည်အပါအဝင်, ဗွီဒီယိုနဲ့ဖြစ်ပါတယ် ...
နောက်ဆုံးပေါ်Intel® Core ™နည်းပညာအပေါ်တည်ဆောက်ပရီမီယံ 4K UHD ကယ်ယူမှ Insight တီဗီ
Insight တီဗီ, action ကိုအားကစား, ဖျော်ဖြေရေး, လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဖုံးအုပ်ဇာတိ UHD HDR အကြောင်းအရာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး UHD ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှယနေ့ကမဆို Universal ကို Windows ပလက်ဖောင်းဖမ်းယူခံရဖို့စစ်မှန်တဲ့ 4K UHD အကြောင်းအရာကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးကို Windows Store က Application ကိုဖန်တီးထုတ်ပြန်ကြေညာ (UWP) device ကို။ အဆိုပါ app သစ်နောက်ဆုံးပေါ် 8th မျိုးဆက်Intel®ပေါ်တွင်တည်ဆောက်နေပါသည် ...
Insight တီဗီ, ဇာတိ UHD အကြောင်းအရာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး UHD HDR ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦး, Monster စွမ်းအင်နှင့်အတူ၎င်း၏အသစ်ကပူးတွဲထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲကြေညာလိုက်ပါတယ်: Gymkhana Grid မှလမ်း, 27th မတ်လ 2018 အပေါ်လန်ဒန်မြို့သောအင်္ဂါရပ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်။ အဆိုပါပြပွဲ Insight တီဗီလိုင်းများနှင့် INSIGHT.TV အပေါ် 14th ဧပြီလအပေါ်ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုဆောင်ခဲ့ ...
Insight တီဗီကော်မရှင်များကိုနှိုးဆှပေးသောနယူးစီးရီး '' တစ်ဆိတ်နှင့်အတူခရီးသွား ''
Insight တီဗီ, action ကိုအားကစားဖုံးအုပ်ဇာတိ UHD အကြောင်းအရာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး UHD HDR ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦး, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ယနေ့ MIPTV 2018 မှာဆိတ်နှင့်အတူခရီးသွား၎င်း၏အသစ်ကပြသ၏ကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုရင်ဆိုင်ရ-to-မျက်နှာအလေ့အထများစားသုံးခြင်းနေ့တိုင်းနောက်ကွယ်မှဘဝနှင့်သေခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အတူတတ်၏။ တစ်ဆိတ်တစ်စိုက်ပျိုးမှု tackles နှင့်အတူခရီးသွား ...
10 ၏စာမျက်နှာ 19«ပထမဦးစွာ...«89101112	»	...နောက်ဆုံး»